Azerbaijan: Afaka i Khadija, Fa Miandry Ny Anjarany Ireo Gadra Politika Hafa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jona 2016 8:48 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Български, Magyar, Español, Español, English
Sary avy amin'i Aziz Karimov ho an'ny EurasiaNet.org, creative commons.
Tamin'ny faran'ny volana Martsa, dia nohamafisin‘i Khadija Ismayilova, ilay mpanao gazety mpanadihady, vao tafavoaka ny fonja, tao amin'ny taratasy nosoratana tany amin'ny efitra tany am-ponjan'i Azerbaijan ary navoaka tao amin'ny Washintong Post ny maha-zava-dehibe ny fandehanan'ny filoha Ilhan Aliyev hitsidika an'i Washintong DC amin'ny fihaonana an-tampony momba ny resaka Fiarovana Nokleary :
Mba ahazoana fanasana avy amin'ny Filoha Obama ho amin'io fotoana io, dia tsy maintsy namela heloka ireo gadra politika marobe izy. Na dia efa tafavoaka ny fonja aza ry zareo dia mbola voageja ao amin'ilay firenena, voarara tsy mahazo miala, sady tsy mbola naverina ny zo. Fanasana sarobidy ho an'i Aliyev izay tsy nety nanaiky ny tery na ny tsikera iraisam-pirenena momba io olana io izany.
Marina tokoa fa telo taona lasa izay dia hoy ny Filoha Aliyev rehefa nijoro teo akaikin'ny Filohan'ny Kaomisiona Eoropeana Jose Manuel Barroso : ” Voalohany indrindra, tiako ny milaza fa tsy misy any am-ponja na dia iray aza ireo fahavaloko ara-politika. Vaovao tsy marina izany. Manaraka izany dia tiako ny milaza fa tsy misy gadra politika any Azebaijan.”
Tamin'izany fotoana izany, vao nahazo hery avy tamin'ny fanapahan-kevitra noraisina tamin'ny Fivorian'ny Parlemantera Mpanolotsain'i Eoropa (PACE) natao tamin'ny Janoary 2013 i Aliyev, fanapahan-kevitra izay nitsipaka ny tatitra momba ireo gadra politika any Azerbaijan.
Natanjaka ara-toekarena ihany koa Azerbaijan, miaraka amin'ny fototra fanondranany solika tsy voadio manodidina ny 100 dolara isaky ny barila (159 litatra).
“Heveriko fa tapitra iny resaka iny” hoy i Aliyev nilaza tamim-pahatokiana tamin'ny mpanao gazetin'ny RFE/RL nanontany azy tao amin'ilay fivoriana, momba ireo voafonja.
Nanomboka tamin'izay, dia niasa mafy Azerbaijan mba hamongorana ny voambolana gadra politika ao amin'ny fireneny.
Aotra ny Politikan'ny tena zavamisy
Lasa litaniam-panjakana ny hoe tsy manana ( gadra politika) mihitsy ny firenena, averimberina foana isaky ny misy hetsika iraisam-pirenena izay itsikerana an'i Azerbaijan noho ny fahambanian'ny tatitra ataony momba ny zo fototra.
Tsy mifanaraka amin'ny hafanampony na ny fanoherany ny governemanta ny sazin'ireo mpikatroka mafana fo, mpanao gazety ary mpanao politika ambony izay miafara any am-ponja any an-toerana.
Fa kosa, nosokajiana ho toy ny gadra rehetra izy ireo saingy fa tsy gadra politika, voampanga amin'ny heloka bevava manomboka amin'ny fandrobàna sy ny fitànana zava-mahadomelina tsy ara-dalàna ka hatrany amin'ny fandosirana hetra sy fanararaotam-pahefana.
Fa tamin'ny 2015, raha mbola nikiry biby sy namerimberina tsy amim-piheverana ilay fangatahana ireo manampahefana, dia nanodidina ny zato ny lisitr'ireo gadra politika nolazain'ireo vondrona mpiaro zo.
Mety hifidy paika hafa ve ireo Baku manampahefana raha toa nandray fanapahankevitra momba ireo gadra politika ao amin'ny firenena ny PACE ?
Tsy fantatra izany, saingy ohatry ny mampisalasala ihany ny hoe navoaka ny fonja tsy nisy teritery iraisam-pirenena avy any Washington sy avy amin'ny firenena tandrefana tamin'ny 26 May i Ismayilova.
Fa angamba, raha natanjaka ny tsindry iraisam-pirenena tany aloha tamin'ny fotoana nampahery vaika ny famoretana tany Azerbaijan tamin'ny 2013, dia mety tsy any am-ponja amin'izao fotoana izao ireo mpiaro zon'olombelona toa an-dry Intigam Aliyev sy Rasul Jafarov ary ireo mpikambana ao amin'ny hetsiky ny tanora N!DA .
Nohazavain'i Ismayilova bebe kokoa tao amin'ilay taratasy tamin'ny volana Martsa ny antony maha-zava-dehibe ny famotsorana ireo gadra politika ireo.
Nosoratan'i Ismayilova fa “Tsy menatra akory i Aliyev miezaka mampiasa ireo gadra politika ho toy ny entam-barotra mba hirosoany amin'ny paikadin'ny politikany ivelany.”
Na izao no mety hataon'i Aliyev:
Modelin'ny rafitra politika Eoropeana ny rafitra politikanay
Rehefa nafahana i Khadija Ismayilova, dia nisambotra mpanao gazety mpakasary iray sy tanora mpikatroka mafana fo ny mpitandro filaminana ny andron'ny nandaozany ny fonja.
Talohan'ny namotsorana azy, mpikatroka mafana fo anankiroa indray no voasambotra sy voalaza fa nampijaliana tany amin'ny terana nitazonana azy tapa-bolana.
Mpikatroka politika iray hafa no naiditra am-ponja tamin'ny 1 Jona, tamin'ny fiverenany ho any Azerbaijan avy any Okraina, tao anatin'ny fandaminana ny fanatrehana ny fandevenana an-dreniny.
Saika ny politikan'ny “iray miditra, iray mivoaka”, sy ny fanamaivanana ny sazy no ampiharin'i Azerbaijan amin'ireo gadra politika 70 mbola any am-ponja, satria mitady hindram-bola amin'ireo rafitra Tandrefana mpikirakira ny ara-bola izy mandritra ny fotoana mamparefo ny toekareny mankina amin'ny ankoranafo.
Mbola hitohy ho takian'ireo izay miady ho an'ny fahalalahana ao anatiny sy ivelan'i Azerbaijan ny famotsorana ireo gadra politika, ao anatin'izany ireo mpanao gazety sy ireo mpitoraka bilaogy Seymur, Nijat Aliyev, Abdul Abilov, Rashad Ramazanov, Faraj Karimli ary Araz Guliyev, tahaka izany koa ireo mpikatroka mafana fo amin'ny politika Fuad Gahramanli sy Ilgar Mammadov. Misy mpikatroka mafana fo amin'ny fivavahana ihany koa ilay lisitra.
Tsy misy mahalala ireo olona ireo raha toa ka hamonjy ny fianakaviany tsy ho ela.
Angamba miankina indrindra amin'ny hoe iza amin'ireo mpitarika malaza no hanana fahavononana hihaona amin'i Aliyev eo amin'ny latabatra poker-n'ny gadra politika hanaovana resabe sy fanentanana indray ny ho avin'izy ireo.
Kazakhstan 8 ora izay